Mogadishu Journal » Xan ayaa leh: Tottenham oo dul dhigtay qiimo Kane
Harry Kane ayaa lala xiriirinayay Manchester City laakiin Tottenham ayaa lagu soo waramayaa inaysan dooneynin inay ka iibiso koox ay xafiiltamaan Premier League.
Harry Kane ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Tottenham suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Laakiin weeraryahanka reer England wuxuu heystaa seddex sano oo kale qandaraaskiisa, heshiiskuna uma sahlanaan doono kooxaha doonaya.
Manchester City waa kooxdii ugu dambeysay ee lala xiriiriyo Kane, madaama ay qiimeynayaan xulashooyinkooda hadii aysan soo ceshan karin Erling Haaland xagaagan.
TOP SHEEKADA - TOTTENHAM OO LA DILAY DANTA KANE
Tottenham ayaa dul dhigtay price 175million Harry Kane iyada oo ay jiraan warar sheegaya xiisaha ay u qabaan kabtankooda.
The Sun ayaa baahisay in Tottenham aysan diyaar u aheyn inay iska iibiso Kane, iskaba daa inay u tartanto koox ka ciyaarta Premier League sida City.
Kane ayaa la fahamsan yahay inuu ku qanacsan yahay inuu sii joogo Tottenham waxaana qiimaha ay u badan tahay inuu joojin doono xiisaha qaaradda.
- Real Madrid ayaa dooneysa inay iska iibiso Martin Odegaard oo reer Norwey ah, kaasoo amaah ku jooga Arsenal, si ay u soo saaraan lacagaha looga baahan yahay inay ku soo xero geliyaan ninka ay dhalashada wadaagaan ee Haaland, sida laga soo xigtay The Times. Gunners ayaa la fahamsan yahay inay isha ku heyso inay si joogta ah ula soo saxiixato Odegaard.
-Barcelona ayaa saxiixa ciyaaryahanka kooxda Inter Lautaro Martinez u aragta saxiix macquul ah hadii ay ku guuldareystaan ​​ku guuleysiga tartanka Haaland, sida ay qortay jariirada Isbaanishka ee Sport.
- Tuttosport ayaa sheeganeysa in Juventus ay diyaar u tahay inay Moise Kean dib ugu soo celiso Turin oo ay kala soo wareegto Everton ka dib markii uu amaah ugu ciyaaray Paris Saint-Germain.
- Shabakadda Isbaanishka ee ABC ayaa soo warineysa in labada Manchester iyo Chelsea ay isha ku hayaan garabka Real Madrid Lucas Vazquez.
Wararkii u dambeeyey Qaraxii caawa ka dhacay Muqdisho iyo Booliska oo ka hadlay